eNasha.com - रियालमा र्‍याल !
केही समयअघि कतारबाट नेपाल फर्किएका गायक प्रकाश पौडेल अहिले साइको गीति एल्बम लिएर बजारमा आएका छन् । अहिले उनको हबिबी... गीत चर्चाको वृत्तमा छ । राम्रो नाम र दाम कमाइरहेका प्रकाश अचानक कतारमा काम गर्न थालेको खबर प्रकाशित भएपछि उनलाई कतारी रियालमा र्‍याल चुहाएको आरोप पनि कतिले लगाए । तर त्यहाँ काम गर्नु र्‍याल चुहाएर होइन कि त्यसबेलाको समयको मागका कारण हो भन्न उनी चुक्दैनन् ।
नेपाली सङ्गीतको उदयसँगै खासगरी रेडियो नेपालको स्थापना र गीतहरु रेकर्ड गर्ने चलनसँगै विभिन्न किसिमका साङ्गीतिक प्रयोगहरु हुँदै आएका छन् । त्यसैले त नारायण गोपाल, कुमार बस्नेत तथा ओमविक्रम विष्टका गायनमा २०२० को अन्तिम दशकमा पपगायनको प्रारम्भिक उदय भएको थियो । त्यसपछि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै खुला वातावरणमा पप गायनले निकै ठूलो फड्को मार्‍यो । २०५० को दशकको मध्यदेखि गायनमा अर्को मोड देखापर्‍यो, जसलाई हिपहप र र्‍याप भनेर पनि चिनिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रकाश पौडेलले गायनको नितान्त नौलो स्वरुप बोकेर थ्री मच एल्बम बजारमा ल्याएका थिए । यो थ्री मचमा उनले रोएर गाएका थिए- नाइँ मलाई त्यै केटी चाहिन्छ । यो गीत बजारमा के आएको थियो, एउटा गुमनाम प्रकाश पौडेल रातारात हिट गायकका रुपमा परिचित भए । तर, सँगै उनलाई सबैभन्दा विवादास्पद गायक भनेर पनि चिनिन्छ । उनको यो गीतका बारेमा साहित्यकारदेखि लिएर मन्त्रीसम्मले चर्चा गरे । गीतसङ्गीतलाई बिगारेको आरोप पनि उनमाथि लगाइयो ।
यसरी बनेको परिचयलाई निरन्तरता दिन नेपाली गीतका अनेक पक्षमाथि उनले प्रयोग गरिरहेका छन् । हालै उनले साइको नामक एल्बम बजारमा ल्याएका छन् । उनको नयाँ एल्बम र पुराना सफलताका बारेमा आज चर्चा गरौँ ।
तपाइँलाई प्रायः रुञ्चे गायक भन्छन् नि ?
शायद पहिलो हिट गीत नै रोएर गाएको हुनाले होला । तर मैले त्यो एल्बममा अन्य किसिमका गीत पनि गाएको थिएँ ।
तपाइँले त नाइँ मलाई त्यै केटी चाहिन्छ गाएर नेपाली सङ्गीतको मोड नै बिगारिदिएको आरोप लगाइन्छ नि ?
धेरैले मलाई त्यो गीत गाउँदा गाली गर्नु भएको छ । एक पटक त प्रख्यात लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले कान्तिपुरमा मेरो गीत र अहिलेको नेपालको राजनीति दुवै मिसाएर गाली गर्नु भएको थियो । त्यसबाहेक अन्य धेरै व्यक्तिले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा गाली गरिरहनु भएको छ ।
तपाइँलाई चाहिँ यो गीत यसरी नै बनाउँछु भनेर कसरी सोच आयो ?
एउटा जमैकन गीत सुनेको थिएँ । मलाई सधैँ लागिरहन्थ्यो कि केही नयाँ काम गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म कसैले नगरेको गीत गाउने विचार अनुसार त्यही गीतको शैली चोरेको हुँ ।
भनेपछि यो जमैकन गीतको नेपालीमा नक्कल गर्नु भएको ?
त्यसो भन्दा पनि त्यो गीतबाट प्रभावित भएको चाहिँ भन्न मिल्छ ।
यसरी गीतलाई हुबहु नक्कल गर्नुलाई तपाइँ राम्रो मान्नुहुन्छ ?
हुबहु नक्कल त नराम्रो काम भयो तर त्यसबाट प्रेरणा लिएर नयाँ कुरा पस्किनु चाहिँ ज्यादै असल काम हो ।
तपाइँलाई त यो गीतले निकै फाइदा दियो क्यारे ! कति कमाउनु भयो ?
जति कमाएँ, सबै सङ्गीतमा नै लगानी गरेँ ।
गायकगायिकाहरुले त गाएर पैसा कमाउँदैनन् भन्छन् नि ?
जो ज्यादै पपुलर हुन्छ, त्यसका लागि त्यो वर्ष कमाई पनि राम्रो हुन्छ । उसले एल्बमबाट एक मुष्ठ रकम पाउँछ । उसलाई विभिन्न ठाउँबाट कर्न्र्सटको निम्तो आउँछ । तर यो डेगिलो र दीर्घकालीन चाहिँ हुँदैन । एल्बम हिट भएको वर्ष मात्र यसले काम गर्छ । त्यसपछिका वर्ष उत्तिकै हिट हुन सकेन भने खान पनि समस्यामा पर्न सकिन्छ ।
सानोमा तपाइँलाई कहिल्यै गाउँछु वा गायक हुन्छु जस्तो लागेको थियो ?
अँहँ, पटक्कै सोचेको थिइनँ । मेरो लक्ष्य चाहिँ डाक्टर हुने थियो । त्यही भएर मैले एसएलसी पास गरेपछि बायोलजी पढ्ने विचारले क्याम्पसमा प्रवेश परीक्षा दिएको थिएँ । तर म फिजिक्समा छानिएँ । त्यसपछि मैले डाक्टर हुने सपना नै त्यागिदिएँ ।
सानोमा कहिले तपाइँलाई सङ्गीतप्रति मोह कसरी मोह जाग्यो ?
सानोमा रेडियो सुन्थेँ । पछि क्यासेटको जमानामा हिन्दी र अंग्रेजी गीतहरु डब गरेर सुन्ने बानी बस्यो । साथीहरुको संगतले अंग्रेजी गीतमा लत लाग्यो । मैले स्कूलको खाजा खर्च जोगाई जोगाई गीतहरु डबिङ गर्थेँ । त्यतिबेला दुइ/दुइ रुपियाँ जम्मा गरेर क्यासेट डब गर्थेँ । शायद त्यो रुचि नै पछि गीत गाउने आधार बन्यो ।
पहिलो पटक कहिले लाग्यो कि अब म सङ्गीत सिर्जना गर्छु / यही नै मेरो लक्ष्य हुनेछ भनेर ?
फरक काम गरौँ भन्ने लागेर एक पटक गीत रेकर्ड गराउने इच्छा जाग्यो । त्यही फरक सोच धरानमा रेकर्ड गराएँ । धेरै साथीभाइले हौसला दिए । पछि एल्बम पनि निस्कियो र ज्यादै हिट भएपछि लाग्यो कि वास्तवमा मैले खोजेको कुरा चाहिँ सङ्गीत रहेछ !
तपाइँ त साइन्स पढ्छु भन्नु हुन्थ्यो, पछि किन कमर्स पढ्नु भयो ?
माथि नै भनेँ कि बायोलजी पढ्नुपर्नेमा फिजिक्सतिर तानिदियो । त्यसपछि साइन्स पढ्न दिक्क लागेर कमर्स पढेँ । कमर्समै डिप्लोमा सकेँ ।
आईकम पढिसकेपछि तपाइँ बीपी कोइराला अस्पताल धरानमा जागीरे हुनुभयो, यसले तपाइँको संगीत सिर्जनालाई असर गरेन ?
अँ जागीरे त भएँ, यसले पैसा लगानी गर्न उति गाह्रो भएन ।
पहिलो एल्बम थ्री मच निस्किएपछि यसको गीत मान्छेले ज्यादै रुचाए, त्यसबेला त निकै होहल्ला भएको थियो । तर दोस्रो एल्बम भाइरस निकाल्दा चाहिँ उत्ति चर्चा भएन नि ?
शायद मेरो छनोट ठीक भएन कि ! नत्र त त्यो एल्बममा पनि मैले प्रयोग नै गरेको थिएँ ।
त्यसमा तपाइँले प्रयोग गर्नु भएको थियो- खासखुस गर्ने गीत । अहिले सम्झिँदा त्यो प्रयोग सफल भएन होइन ?
लोकप्रियताको हिसाबले त्यो सफल भएन । तर मैले नयाँ प्रयोग गर्न डराइनँ । त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ ।
त्यसपछि तपाइँले आफ्नो तेस्रो एल्बम रेस थ्री निकाल्नु भयो । त्यसमा सुकेको जीउ...को गीतको चर्चा निकै भयो । तर एल्बम त्यति बिक्री भएन भन्छन् नि ?
राम्रो बिक्री भएको हो ।
अहिले तपाइँको नयाँ एल्बम साइको बजारमा आएको छ, यो एल्बममा तपाइँले के भन्न खोज्नु भएको छ ? किन नाम साइको राख्नु भएको ?
अलि भिन्दै किसिमको प्रयोग यसमा पनि भएकाले नाम साइको राखेको हो । यसमा मैले र्‍याप दोहोरी र 'किस' सम्बन्धी गीत दुवै प्रयोगात्मक गीत राखेको छु । हबिबि... गीत त अहिले नै हिट भइसकेको छ । मलाई लाग्छ, यसले दर्शकको ध्यान पुनः मतिर आकर्षित गर्नेछ ।
यत्तिका एल्बम निकालिसकेको व्यक्ति, यति धेरै नाम कमाइसक्नु भएको छ । पछि खबर सुनियो कि तपाइँ कतारमा जागीर खान जानु भयो अरे, खास के हो ?
खासमा एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रमको निम्तो मान्न कतार गएको थिएँ । त्यहाँ मेरा धेरै साथीहरु काम गर्छन् । उनीहरुले एउटा राम्रो प्रस्ताव राखे जागीरको । मैले पनि फूर्सदको समय सदुपयोग गरेर त्यहाँ काम गरेँ ।
अब फेरि जाने योजना छ कि ?
अब अहिले तुरुन्तै फर्किने त योजना छैन तर देशको स्थिति यस्तै रहने हो भने जान पनि सक्छु ।
तपाइँको भविष्यको योजना के छ ?
मैले भविष्यमा केही गरेँ भने सङ्गीत उद्योगमै केही गर्छु ।
गायक रिलिज सङ्गीतकार लुकेका कुरा उपलब्धि कीर्तिमान समुद्रपार क्या बात ! तातोपीरो ट्रयाक बाहिर अवार्ड नेपाली तारा भिडन्त प्रेम र विवाह गायिका विचार पेज थ्री रुचि गीतकार हल्ला